U Sisulu uzohambela e Cornubia ksasa – Sivubela intuthuko Newspaper
UNgqongqoshe uLindiwe Sisulu uhambele isifundazwe saKwa Zulu-Natali izinsuku ezimbili ukuzohlangana nezinhlaka ezithintekayo.
UNgqongqoshe obhekele umnyango wezokuHlaliswa kwabantu, amanzi kanye nokuthuthwa kwendle u Lindiwe Sisulu uzovakashela i Cornubia Integrated Residential Development Project kusasa. Inhloso yokuvakasha kuka Ngqongqoshe ukuzohlola ukuqhubeka komsebenzi, ukunikela ngamatayitela kanye nokuphendula isoyi lesikole esizokwakhiwa.
I phrojekthi yase Cornubia ithinta uhlelo lokwakhiwa kwezindlu zikanokusho, izimboni, amapaki kanye namahhovisi wamabhizinisi ehlukene. Lolu uhlelo lomnyango wezokuhlaliswa kwabantu luka zwelonke olubhekele izidingo zezindlu, ukwenyusa izinga lokufinyelela kwizidingo ezifana nemigwaqo esezingeni, izikole, nezokuthutha.
Okunye ukuthuthukiswa kwendawo okumanyaniswa ne Cornubia IRDP Project kubalwa i Mt Edgecombe Interchange eyakhiwe ku N2 onguthela wayeka obheke e King Shaka International Airport ne Cornubia Mall.
Ukuhambela kuka Ngqongqoshe e Cornubia kuzokwandulelwa uchungechunge lemihlangano azoba nayo nezinhlaka ezithintekayo, okubalwa oNgqongqoshe beminyango eyahlukene, amaBhodi abhekele ezamanzi kanye nosomabhizinisi.
UNgqongqoshe kulindeleke ukuthi aphelezelwe isekela Ngqongqoshe womnyango wakhe u Nkk Pamela Tshwete, u Mnu David Mahlobo, uNgqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu nemisebenzi yomphakathi u Nkk Peggy Nkonyeni, uNgqongqoshe wokusebenza ngokubambisana koHulumeni nezindaba zomdabu u Mnu Sipho Hlomuka kanye noNgqongqoshe wezemfundo esifundazweni uMnu Kwazi Mshengu.
“Angazi ngifake bani ngiyeke bani emdlalweni wethu ne Egypt”: Stuart Baxter